Waxyaabaha ku jira boggeygu si gaar ah uma xooganeyn usbuucii la soo dhaafay - waan ka xumahay haddii midkiin uu niyad jabo. Waxaan si aad ah ugu mashquulsanaa sameynta codsiyo faro ku tiris ah oo guriga yaal. Waxa aanan ka koobnayn waxa ku jira, waxaan rajeynayaa inaan ku soo daro qaar ka mid ah waxyaabaha la soo koobay. Shaqada, waxaan u diyaar garoobeynaa soo deyn weyn oo softiweer ah waxaanan heystaa mashruuc mudaaharaad ah oo bixin doona qaab lagu iskudaysto qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan. Wax badan ayaa miisaamaya guushayda waxaanan haystaa ilo dhaqaale oo aan ku dhammeeyo markaa waa caqabad.
Dhammaan mashaariicdu si wanaagsan ayey u socdaan oo waxaan la kulmi doonaa waqtiyada kama dambaysta ah, waxay qaadaneysaa toddobaadyo shaqo oo culus. Sidoo kale, waxaan dib-u-qiimeynayaa shaqadayda waqtiga buuxa oo aan si taxaddar leh u tixgelinayaa mustaqbalkeyga halkaas oo aan ku miisaamayaa fursado xoog leh oo dibadda ah. Waad neceb tahay inaad ka tagto shaqo-bixiye weyn, laakiin mararka qaarkood shaqadu waa inay hoos ugu dhacdo dhaqaalaha fudud. Ma jecli inaan fiiro gaar ah u yeesho lacagta markay tahay shaqo, laakiin waxaan la shaqeynayay rajo ah inaan la qabsado dakhligeyga dhowr sano ka hor markii aan la tashanayay. Waxaa cadaatay inaysan taasi dhici doonin hadaan sii joogo. Aniga oo wiil bilaabay Jaamacad dayrta, waa inaan wax ka beddelo oo aan si dhakhso leh u sameeyo.
Waan jeclahay isbadalka waana ku faraxsanahay fursadahayga. Waxaan ku sigtay inaan baxo bilow ah dhawr bilood ka hor, laakiin waqtigu sax ma ahayn. Waxay umuuqataa mid quruxsan, hadda. Dad yar ayaa dib u cusbooneysiin kara dib-u-bilaabiddooda inay ka caawiyeen shirkadaha ka socda Jasiiradda Vancouver ilaa Iceland ilaa Australia inay hirgeliyaan ujeeddooyinka istiraatiijiyadeed ee suuq-geynta internetka, is-dhexgalka, iyo otomaatiga. Macaamiishaydu waxay ka mid ahaayeen kuwa ugu waaweyn adduunka, oo ay ku jiraan Indianapolis Colts, Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, AG Edwards, iyo shirkado kale oo horumarineed iyo hay'ado u dhexeeya. Intaas ka hor, waxaan u dhisay wargeys weyn malaayiin doollar oo loogu talagalay barnaamijka boostada. Guushu waxay dhistaa kalsooni, sidaa darteed kalsooni weyn ayaan ku qabaa inaan leexan karo shirkad kasta markay tahay Suuqgeynta iyo Teknolojiyada.
Aniga oo ah La-Taliyaha Is-dhexgalka iyo Maareeyaha Wax soo saarka, mas'uuliyadaydu waxay noqotay la-tashiga ganacsiyada, tilmaamidda fursadaha, iyo fulinta xalka ku habboon ee iyaga u gaarka ah. Mas'uuliyadayda hadda jirta waxay diiradda saareysaa u hoggaansamida CAN-SPAM, Naqshadeynta Wajahadda Isticmaalaha, Helitaanka, Isticmaalka, API iyo muujinta horumarka. Waxaan sidoo kale sifiican uyaqaanaa Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed, Falanqaynta iyo Mashiinka Raadinta. Heck, xitaa waxaan magacayga ku helay daabacaad sannadkan aniga oo u soo gudbiyay qaar ka mid ah Buugga Chris Baggott, Suuqgeynta Emailka ee Lambarada.
Waxaan rajaynayaa inaan sii wado shaqadan noocan ah - iyada oo loo marayo shirkaddayda la talinta ama iyada oo loo marayo jagada Agaasimaha / Fulinta ee shirkad kale. Sidoo kale waan xiiseynayaa waqti dheer xiriirada qandaraaska. Riyo ii rumowday waxay noqoneysaa inaan mar labaad la tashado shirkadayda. Kama tagi karo Indianapolis - caruurtaydu halkan way ku jecel yihiin waxayna ku nool yihiin meel u dhow Hooyadood. Markaa haddii ay jirto fursad lagu shaqeysan karo fogaan-fog, anigu intaas oo dhan ayaan u ahay sidoo kale. Waxaan rajeynayaa inaan ku quusto madaxa ugu horreeya qaar ka mid ah caqabadaha cusub, laga yaabee inay ku fiicnaato Mashiinka Raadinta. Waxaan ku soo qaatay natiijooyin cajiib ah boggan waana ogahay inaan wax kale u qaban karo.